Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Guam » Manam-pahaizana momba ny diabeta ambony sy orinasa AI izay mankany Guam
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Guam • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • fampiasam-bola • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ireo mpitarika ara-pahasalamana ao Guam dia miara-miasa amin'ny manam-pahaizana momba ny teknolojia diabeta ambony hanao fikarohana ao amin'ny Guam.
Ny fandinihana natao dia hifantoka amin'ny fanangonana tahirin-kevitra momba ny fahasalamana avy amin'ny loharanom-pahalalana samihafa sy ny fampiharana ny AI hamantatra ireo anton-javatra mampidi-doza ary hanome fomba fijery amin'ny fitsaboana ireo mararin'ny diabeta.
AI Health dia manampahaizana manokana amin'ny fampiasana AI sy IoT hanome vahaolana ara-pahasalamana tsotra izay miasa amin'ny tontolo tena izy ankehitriny, amin'ny fomba mahomby sy mifanaraka amin'ny fiainana manokana.
Ny fitarihana ny fanadihadiana dia ho sasany amin'ireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana ambony indrindra manerantany amin'ny diabeta, fitsaboana ary teknolojia - indrindra momba ny faharanitan-tsaina artifisialy sy ny haitao azo anaovana.
Guam Regional Medical Center (GRMC), American Medical Center (AMC), ary Calvo's SelectCare dia nanambara androany fa nanatevin-daharana ny AI Health izy ireo hanangana fiaraha-miasa amin'ny fikarohana fikarohana ara-pitsaboana (AI) ho an'ny nosy Guam. Ny fandinihana natao dia hifantoka amin'ny fanangonana tahirin-kevitra momba ny fahasalamana avy amin'ny loharanom-pahalalana samihafa sy ny fampiharana ny AI hamantatra ireo anton-javatra mampidi-doza ary hanome fomba fijery amin'ny fitsaboana ireo mararin'ny diabeta.
Ny fitarihana ny fanadihadiana dia ho sasany amin'ireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana ambony indrindra manerantany amin'ny diabeta, fitsaboana ary teknolojia - indrindra momba ny haitao artifisialy sy ny haitao azo anaovana. ny Fahasalamana AI Ny Birao Mpanolo-tsaina dia misy an'i David C. Klonoff, MD (mpisava lalana amin'ny Diabetes Technology); ary Francisco J. Pasquel, MD (manam-pahaizana amin'ny fanatsarana ny fikarakarana amin'ny Diabetes Technology).
Ny diabeta dia miteraka olana lehibe eo amin'ny fahasalamam-bahoaka izay misy fiantraikany amin'ny tsy fitoviana amin'ny olona avy amin'ny razambe aziatika, teratany Hawaii ary avy any Pasifika. Raha ny angom-baovao farany azo avy amin'ny CDC, ny fihanaky ny diabeta any Guam dia avo kokoa noho ny ankamaroan'ny faritra Etazonia, ary eo amin'ireo olon-dehibe manana lova Chamorro dia 18.9% - efa ho iray amin'ny enina.
Guam dia toerana mety handinihana diabeta amin'ny fampiasana AI. "Niorina tamin'ny fomba tokana i Guam mba hamoronana fiantraikany manan-danja manodidina ny fanadihadiana manerantany, ary ny tena zava-dehibe dia mamela antsika hamela lova tsara hitondra fiatraikany eo amin'ny fiarahamonina ho an'ireo izay voan'ny diabeta," hoy ny dokotera Klonoff. “Ny Guam dia tsy manome fotsiny santionany solontena tena lehibe ho an'ny fianaranay, fa manome antsika fahasamihafana ara-poko koa, fisian'ny ankamaroan'ny aretina mitaiza, ary vondrom-pitsaboana sarotra. Kely ihany koa ny nosy mba hahafahantsika manao fanadihadiana mifehy sy mahomby, ahafahantsika mampifandray mivantana ireo maro amin'ireo mpandray anjara lehibe amin'ny tontolon'ny fahasalamana. "
Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny hopitaly, mpamatsy fiantohana, mpitsabo voalohany, marary ary laboratoara Guam, orinasa teknolojia Fahasalamana AI mijery hanangonana fampahalalana tsikera avy amin'ireo loharano rehetra ireo ho ao amin'ny sehatry ny faharanitan-tsaina. Raha vantany vao tafangona, ny ekipa dia hampihatra teknika AI maro hanamafisana ny marary, haminavina ny fivoaran'ny aretina, ary hahitana fotoana manokana ho an'ny fidirana an-tsehatra mialoha hanatsarana ny valin'ny marary.
Guam Regional Medical Center dia hiasa ho toy ny Birao famerenana anatiny momba ny fianarana. "Faly ny GRMC handray anjara amin'ity fiaraha-miasa fikarohana mahavariana ity izay antenainay fa hitondra fiandohan'ny vanim-potoana vaovao eo am-pikarakaran'ny olona miaina diabeta, tsy any Guam ihany fa manerana an'izao tontolo izao," hoy ny Lehiben'ny mpitsabo GRMC Dr. Alexander Wielaard.